ဤရွေ့ကားလွန်ခဲ့သော 10 နှစ်အတွင်း POSTED အများဆုံးကြိုက်နှစ်သက် INSTAGRAM ကိုဓာတ်ပုံများဖြစ်ကြသည် - သတင်း
အဆင့် - အမြင့်ဆုံး ၂၀ ခုအကြိုက်ဆုံး Instagram ပို့စ်များ
Instagram သည်၎င်း၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ရာလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းအကြိုက်များများစားစားမရှိခဲ့ပါ။ ဒီ app မှာတစ်နေ့ကိုအကြိမ်ပေါင်း ၃.၅ ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်။ ငါ ၁၀ နှစ်အတွင်းဘယ်လောက်ကျမယ်ဆိုတာကိုတောင်တွက်မတွက်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်အချက်က LOT ရှိတယ်။ Kylie Jenner မှာသူတို့ထဲကတစ်ဝက်လောက်ရှိတယ်။ ထိပ်ဆုံးအယောက် ၂၀ တွင်အနှစ်သက်ဆုံး Instagram ပို့စ် ၂၀ တွင် Kylie သည်အယောက် ၂၀ အနက်ရှစ်နေရာတွင်ရှိသည်။
အပြင် Kylie မှစ။ အပေါ် စာရင်း အများဆုံးကြိုက်နှစ်သက်သည့် Instagram ရုပ်ပုံများတွင် Selena Gomez သည်စာမူနှစ်ခုပါသည့် Rock၊ Chadwick Boseman နှင့်ဥတစ်လုံးရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲ။
အံ့သြစရာကောင်းတာကအခြား Kardashian klan ၏ဓာတ်ပုံများသည်ဤအဆင့်သို့ရောက်အောင်မရောက်နိုင်ပါ။ Kris Jenner fuming ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်း ၂၀ သည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်က Instagram တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးအရာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ငါသည်ငါ့အားလပ်ရက်အပေါ်ရတကယ်ချစ်စရာ pic စာရင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီ Instagram ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံ ၂၀ ပါ။
20. Kylie Jenner, Travis Scott နှင့် Stormi
မျှဝေသည် ကေလီ🤍 9:50 pm တွင် PDT မှာ@ပြီလ 25, 2019 ရက် (@kyliejenner)
Kylie ရဲ့ထိပ်တန်း 20 ပို့စ်များကိုပထမဆုံးရွေးလိုက်ခြင်းသည် Travis နှင့် Stormi နှင့်အတူသူမ၏ချစ်စရာကောင်းသည်။ ပုံတွင် ၁၃၅၈၀၇၈၇ ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး Travis နှင့် Kylie တို့အတူတကွရှိနေစဉ်က201ပြီလ 2019 တွင်တင်ခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်အချိန်များ။
19. Stormi နှင်းလျှောစီး
ငါသည်ဤ handle ကိုင်တွယ်လို့မရပါဘူး
မျှဝေသည် ကေလီ🤍 (@kyliejenner) ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၉ တွင်ည ၁၁ နာရီ ၂၂ မိနစ်တွင် PST
သူမသည်အသက်သုံးနှစ်ပင်မပြည့်သေးသော်လည်း Stormi သည်နှင်းလျှောစီး။ သမိုင်းတွင်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုများကိုရနိုင်သည်။ Kylie Jenner ကိုသင့်အမေအဖြစ်ထားခြင်းဟာကောင်းပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတင်ခဲ့ပြီး ၁၃,၆၉၇,၅၄၅ ခုအကြိုက်တွေ့တယ်။
မျှဝေသည် ကေလီ🤍 1:29 pm တွင် PDT မှာ, 2020, စက်တင်ဘာ 10, (@kyliejenner)
ထိပ် ၂၀ မှ Kylie မှတတိယမြောက်ဓာတ်ပုံမှာသူမနှင့်ကိုက်ညီသောတစ်ကိုယ်တော်ရိုက်ချက်များဖြစ်သည်။ တရားပါတယ်။ ဒီ post ကိုယခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်တင်ခဲ့ပြီးအကြိမ် ၁၄ သန်းနီးပါးရှိပြီးဖြစ်သည်။
17. Billie Eilish ရဲ့အများအပြား Grammy အနိုင်ရရှိ
မျှဝေသည် BILLIE EILISH 12:06 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 27, 2020 တွင် (@billieeilish)
နောက်ဆုံး Kylie ကနေချိုး။ ဘီလီ၏ကောင်းစွာခံထိုက်သောအောင်မြင်မှုများကိုဂုဏ်ပြုသောဤဓာတ်ပုံသည်ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသူမ၏ငါးဂရမ်မစ်ကိုကိုင်ဆောင်ထားသည်။ အဘယ်သူမျှမကြီးတွေသဘောတူညီချက်။
ဒါဟာ 13,894.667 likes အပေါ်လက်ရှိပါပဲ။
16. Kylie နှင့် Stormi
ငါနင့်ကိုလွင့်စေချင်တဲ့ဒီကလေးလေးကိုအရမ်းချစ်တယ်။ တခါတလေကိုယ့်ကိုသူကြည့်ပြီးသူမဘယ်တော့မှဒီသေးသေးလေးဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိပြီးငိုခဲ့တယ် သင်၏နှလုံးအများစုကိုယူနိူင်သည်ကိုအနည်းငယ်သာသိရှိနိူင်သည်ကိုသူသိသည်။ @vogueczechoslovakia
မျှဝေသည် ကေလီ🤍 (@kyliejenner) ဇန်နဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၂၀ မှာ ၁၁:၃၄ နာရီမှာ PDT
ပြန် Kylie ရန်။ သူမ၏နမ်းနေသော Stormi ၏ပုံမှာအလွန်ချစ်စရာကောင်းသောကြောင့် ၁၄ သန်းကျော်အကြိုက်ရှိသည်။ ကေလီသည်ယခုနှစ်ဇွန်လတွင်၎င်းကို Vogue Czechoslovakia အတွက်ရိုက်ကူးစဉ်ကပြောကြားခဲ့သည်။
15. Kylie နှင့် Travis
ဟူစတန်သည် LA နှင့်တွေ့ဆုံသောအခါ ..playplay #ComingSoon
မျှဝေသည် ကေလီ🤍 7:00 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာလ 10, 2019 ရက်တွင် (@kyliejenner)
ဒီမှာသွားတစ် ဦး ဆောင်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ Kylie နှင့် Travis တို့၏ NSFW ဓါတ်ပုံတွင်အကြိုက် ၁၄၀၀၇၃၅၆ ရှိပြီး၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စက်တင်ဘာလတွင်တင်ခဲ့သည်။
Travis သည် Kylie နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သောဓါတ်ပုံသည် Playboy အတွက်သူတို့၏ရိုက်ကူးမှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
14. Kobe က Bryant ရဲ့နောက်ဆုံး Instagram ကို post ကို
#2@kingjames သို့ On! ဂိမ်းကြီးထွားလာခြင်းနှင့်လာမည့်အဘို့လမ်းကြောင်းကို charting ။
မျှဝေသည် Kobe Bryant (@kobebryant) ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်၊
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက Kobe Bryant သည်သမီးဖြစ်သူ Gigi နှင့်အတူယခုနှစ်အစောပိုင်းကရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
သူကွယ်လွန်သည့်နေ့တွင်သူ၏သူငယ်ချင်း LeBron James အားကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ ယခုပုံသည်အကြိုက်ပေါင်း ၁၄.၁ သန်းကျော်စုဆောင်းထားသည်။
13. Cristiano ရော်နယ်ဒိုရဲ့မွေးနေ့
ငါ့မွေးနေ့ကိုကျင်းပရန်“ ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအံ့သြဖွယ်ရာအတွက်ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဂုဏ်ပြုရန်” အချိန်တန်ပါပြီ
မျှဝေသည် Cristiano ရော်နယ်ဒို 2:36 pm တွင် PST မှာ 2020, ဖေဖော်ဝါရီ 5, 2020 တွင် (@cristiano)
အပြင် Instagram ၏တရားဝင်အကောင့်မှသည် Cristiano ရော်နယ်ဒိုသည်အက်ပလီကေးရှင်းတွင်အများဆုံးလိုက်နာကျင့်သုံးသူဖြစ်သည်၊
ဤရိုးရှင်းသောမွေးနေ့ရုပ်ပုံသည်အကြိုက်ပေါင်း ၁၄.၃ သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်တင်ခဲ့သည်။
Selena Gomez နှင့်သူမ၏သူငယ်ချင်းများ
ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကလက်ထပ်နေပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့သူ့ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်။ အနာဂတ်မစ္စစ်လိုပက်ဇ်
မျှဝေသည် Selena Gomez (@selenagomez) ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်၊
ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါကမ်းခြေကိုသွားပြီးဒီလိုပုံမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ထိုအသေးဘယ်မှာငါတို့ 14,465,670 အကြိုက်ဆုံးရှိပါသလဲ ဆယ်လီနာသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဤတင်ခဲ့သည်။
အီတလီမှာ 11 Selena
ငါ, အီတလီ, Fellini ရုပ်ရှင်လိုကြည့်ဖို့အလွန်အမင်းကြိုးစားနေ
မျှဝေသည် Selena Gomez (@selenagomez) ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်၊
အစဉ်အဆက်အများဆုံးအကြိုက်ဆုံးရုပ်ပုံများ 20 ၏အဆင့်အတွက် Selena ရဲ့ဒုတိယ post ကိုအီတလီမှာရှိတဲ့လှေပေါ်တွင်သူမ၏ရုံရုပ်ပုံလွှာဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည် Instas တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ရက်များမှဤကဲ့သို့သောပုံများရရှိထားပြီးကြိုက်ရာပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရရှိပါကကံကောင်းနေစဉ် Selena သည်သူမ၏ဤလှပသောဓာတ်ပုံအတွက် 14.4 သန်းအကြိုက်ကိုရရှိခဲ့သည်။
ငါတို့လုပ်တယ် သြဂုတ်လ 18, 2019. ဟာဝိုင်ယီ။ မင်္ဂလာ @ laurenhashianofficial❤️ @ hhgarcia41
မျှဝေသည် ချစ်သူ 3:27 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 19, 2019 ရက်တွင် (@therock)
နံပါတ် ၁၀ မှာဒီ Rock နဲ့သူ့ဇနီး Lauren Hashian တို့၏မင်္ဂလာဆောင်မှပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောပုံဖြစ်သည်။
သူသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သြဂုတ်လအတွင်းကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်တစ်ရက်တွင်အကြိမ် ၁၄.၅ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။
မျှဝေသည် ကေလီ🤍 (@kyliejenner) မတ်လ ၂၆ ရက်၊
Kylie သည်သူမကြိုက်နှစ်သက်သောဓာတ်ပုံများနှင့်မပြီးပါ။ Stormi ရေချိုးနေသည်ဟူသောချစ်စရာကောင်းသောပုံကိုယခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၁၅,၃၃၈,၃၅၇ အကြိုက်ရှိသည်။
Kobe Bryant သို့ LeBron James ၏အပ်နှံပွဲ
ငါအဆင်သင့်မဖြစ်ပေမယ့်ဒီမှာငါသွား။ ငါဒီနေရာမှာထိုင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်၊ ဒီ post အတွက်တစ်ခုခုရေးဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ငါကြိုးစားတိုင်းမင်းကမင်းရဲ့မင်းသမီး Gigi နဲ့ငါတို့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု၊ နှောင်ကြိုး၊ ငါ Philly မှပြန်လာပြီး LA သို့ပြန်သွားသည်မတိုင်မီတနင်္ဂနွေမနက်မှာသင်၏အသံကိုကြားလိုက်ရသည်။ ငါတို့ရှိသည်ချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးစကားပြောဆိုမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ် ဦး သန်းနှစ်အတွင်းတစ်နည်းနည်းအဘို့မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ WTF !! ငါဝမ်းနည်းပက်လက်ငါ့ညီပျက်စီး !! ။ ငါမင်းငါ့ကိုချစ်တယ် ငါ့နှလုံး Vanessa နှင့်ကလေးတွေသွားတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏အမွေလူကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်သင်ကတိ! သငျသညျအထူးသဖြင့် #LakerNation ဒီနေရာကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ဤမျှလောက်များစွာသောဆိုလိုတာကြောင့်ငါ့နောက်ကျောပေါ်မှာဤ shit ထားနှင့်သွားစောင့်ရှောက်ရန်ငါ့တာဝန်ပဲ !! ငါ့ကိုကောင်းကင်မှခွန်အားပေးပါ။ ငါဒီမှာအမေရိကန်တယ်။ ငါပြောချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအခုမှမရနိုင်တော့တာငါမှတဆင့်မရနိုင်လို့ပါ။ ငါတို့ညီကိုထပ်တွေ့ဆုံသည်အထိ !! # Mamba4Life❤️ # Gigi4Life❤️
မျှဝေသည် Lebron ဂျိမ်းစ် (@kingjames) ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်၊
တစ် ဦး dildo များအတွက်သုံးစွဲဖို့အရာ
Kobe Bryant ၏ကြေကွဲဖွယ်သေဆုံးမှုပြီးနောက်နှစ်ရက်အကြာတွင် Lebron James သည် Instagram တွင်သူ၏အခမ်းအနားကိုမျှဝေခဲ့ပြီးအကြိမ်ရေ ၁၅ သန်းကျော်အမြန်ရရှိခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့အအောင်မြင်ဆုံး Post m ၅ မီတာ - သစ်ပင် ၅၀၀ ကီလို✔️ ၂၀ မီတာ - ၁ ၁ သစ်⏳ ၅၀ သန်း - အကြိုက် ၁၀၀ အကြိုက် - the ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်တည်မြဲသောရာထူးနေရာရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်နှင့်ပူးပေါင်းပါ။ သစ်ပင်များပိုမိုစိုက်ရန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစတင်ရန်သူတို့၏လက်ချောင်းများကိုချီမြှောက်ခဲ့ကြသောသန်းပေါင်းများစွာသောလူများအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီပို့စ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားမှာသစ်ပင် ၅၀၀,၀၀၀ ကိုအတူတကွစိုက်ပျိုးမှာပါ။ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ဒါပေမယ့်ငါတို့ဒီမှာမရပ်ဘူး ဤ post တွင်အကြိုက်အရေအတွက်တိုးများလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအဆင့်သစ်ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သစ်ပင်များကိုပင်စိုက်နိုင်လိမ့်မည်။ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
မျှဝေသည် နင် 5:01 pm တွင် PDT မှာAprပြီ 22, 2019 ရက်တွင် (@tentree)
နည်းနည်းကျပန်းပေမယ့်ထိပ်ဆုံးကြိုက်နှစ်သက်သည့်ဓာတ်ပုံများအနက်တစ်ခုမှာ TenTree မှဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပို့စ်တစ်ခုသည်အကြိုက်အများစုသို့ရောက်သောအခါသစ်ပင်များကိုစိုက်မည်ဟုပြောသည်။
၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်Aprilပြီလတွင်တင်ခဲ့သည်။ အကြိမ် ၁၅ သန်းကျော်အကြာတွင်သစ်ပင် ၅၀၀ ကိုစိုက်ခဲ့ပြီးအကြိမ် ၂၀ သန်းအကြာတွင်၎င်းတို့သည်သစ်ပင်တစ်သန်းစိုက်ပျိုးလာလိမ့်မည်။
Travis 6. Kylie ရဲ့မွေးနေ့အခွန်ဆက်
DADA 🤍ယခုနှစ်ဖေဖေ၏မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ ငါမုန်တိုင်းတစ်ဖေဖေရဲ့မိန်းကလေးဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံဖို့စတင်ဖြည်းဖြည်းပေမယ့်သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ကျနော်တို့ကြီးမြတ်အပေါ်တစ်ဝက်သွားလေ၏! အလှပဆုံး၊ စမတ်၊ မေတ္တာနှင့်ရယ်စရာကောင်းသောကလေးငယ် အကောင်းဆုံးလက်ဆောင် ok ငါငိုတယ်။ ထာဝရအချစ် @travisscott
မျှဝေသည် ကေလီ🤍 (@kyliejenner) ၂၀၂၀၊ ,ပြီ ၃၀ ရက်၊
ရုံထိပ်ဆုံးငါးခုပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးနေ, Travis ဖြစ်သူမှ Kylie ရဲ့အခွန်ဆက်တိုက် post ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ylပြီလမှာ Kylie ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများဟာ ၁၆ နှစ်နီးပါးအကြားတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ပေါ်လာသည်။
ယခုမှာအကျွန်ုပ်တို့သည် Instagram သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည်။ HI INSTAGRAM
မျှဝေသည် ဂျနီဖာ Aniston 6:03 pm တွင် PDT မှာအောက်တိုဘာ 15, 2019 ရက်တွင် (@jenniferaniston)
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်နီးပါးခန့်ကဂျနီဖာ Anniston သည် Instagram ကို ဆက်သွယ်၍ အင်တာနက်ကိုဖဲ့ခဲ့သည်။ သူမရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး post အတွက်သူမရဲ့သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ selfie ကိုမျှဝေခဲ့သည်။
David Attenborough သည် Instagram သို့မ ၀ င်ခင်နောက်လိုက်တစ်သန်းအထိအမြန်ဆုံးလူအတွက်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးစံချိန်ရှိခဲ့သည်
မျှဝေသည် ကေလီ🤍 1:14 pm တွင် PST မှာဖေဖော်ဝါရီ 6, 2018 ရက်တွင် (@kyliejenner)
မုန်တိုင်းထန်နေတယ်လို့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သင်မွေးဖွားခြင်းအတွက်စာသားအတိုင်း Instagram ပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးဓာတ်ပုံငါးခုတွင်ပါဝင်သည်။ Kylie သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်တင်ပြခဲ့ပြီး၎င်းတွင်လက်ရှိတွင်အကြိုက်ပေါင်း ၁၈.၅ သန်းကျော်ရှိသည်။
3. Chadwick Boseman ရဲ့မိသားစုကသူသေဆုံးကြေညာခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Chadwick Boseman သေဆုံးခြင်းကိုအတည်ပြုနိုင်သည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကြီးမားသောဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုနှင့်အတူဖြစ်သည်။ adfစစ်မှန်သောတိုက်လေယာဉ်တစ် ဦး ဖြစ်သူ Chadwick သည်၎င်းအားလုံးအားတွန်းအားပေးခဲ့ပြီးသင်အလွန်ချစ်မြတ်နိုးခဲ့သောရုပ်ရှင်များစွာကိုသင့်အားယူဆောင်လာခဲ့သည်။ မာရှယ်မှသည် Da5Bloods၊ သြဂုတ်လ Wilson ၏ Ma Rainey ၏အနက်ရောင်အောက်နှင့်အခြားအရာများအထိမရေတွက်နိုင်သောခွဲစိတ်မှုနှင့်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုကာလအတွင်းနှင့်အကြားရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ King King ဘုရင်မင်းမြတ် T'Challa အား Black Panther ၌နေထိုင်ရန်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၏ဂုဏ်အသရေသည်။ ⁣⁣ home ⁣ died his his his home his home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home home သူသည်မိမိအိမ်၌မယား၊ family ⁣မိသားစုသည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆုတောင်းချက်များအတွက်သင့်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤခက်ခဲသောအချိန်ကာလအတွင်းသူတို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကို ဆက်လက်၍ လေးစားရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည်။ Credit ဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံ - @samjonespictures
မျှဝေသည် Chadwick boseman (@chadwickboseman) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၈ ရက်ည ၇း၁၁ နာရီတွင် PDT တွင်
Chadwick Boseman ရဲ့ဖြတ်သန်းခြင်းသတင်းဟာလူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးကျယ်တဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းပါပဲ။ နှင့်လူ 19 သန်းကျော်ကသူဝမ်းနည်းစွာသူသည်မည်သူ့ကိုမျှမပြောဘဲပြီးခဲ့သည့်လေးနှစ်အဘို့နှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့ကင်ဆာကနေကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်းသူ၏မိသားစုရဲ့ကြေညာချက်ကြိုက်တယ်
2. XXXTentacion ရဲ့နောက်ဆုံး Instagram ကို post ကို
မျှဝေသည် တောင်ကုန်းကိုတက်စေ 4:06 pm တွင် PDT မှာမေလ 19, 2018 ရက် (@xxxtentacion)
tiktok အပေါ် Vogue စိန်ခေါ်မှုလုပ်ဖို့ဘယ်လို
2018 ခုနှစ်တွင်သူမသေဆုံးမှီ XXXTenaction ၏နောက်ဆုံး Instagram ကို post ကို 21 သန်းကျော်ကျော်ရှိပါတယ်နှင့် 18 သန်းကျော်နောက်လိုက် 18 သောသူ၏ Instagram ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျန်ကြွင်းသောတစ်ခုတည်းသောဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အနိုင်ရသူကတော့ဥ ..an ပဲ
အတူတူကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြီး Instagram မှာအကြိုက်ဆုံးနေရာကိုယူကြပါစို့။ Kylie Jenner (၁၈ သန်း) ကလက်ရှိကမ္ဘာ့စံချိန်ကိုရိုက်သည်။ ဤ #LikeTheEgg #EggSoldiers #EggGang ကိုကျွန်ုပ်တို့ရခဲ့သည်
မျှဝေသည် ယူဂျင်း | #EggGang (@world_record_egg) ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်၊
လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်အတွင်း Instagram တွင်အကြိုက်ဆုံးပုံမှာကြက်ဥဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်သူ၌အကြိုက် ၅၄ သန်းကျော်ရှိပြီးများစွာသောအကြောင်းရင်းမှာ၎င်းကိုအတိအကျပြုလုပ်ရန်ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်သည်။
The ကမ္ဘာကြီး အကောင့်ကကမ္ဘာ့စံချိန်ရပြီး Kylie Jenner ကိုထိပ်ဆုံးနေရာမှာထားချင်တယ်။ ထိုသို့ဘုရား၌ကျေးဇူးတင်ပါ။
• ယခုတွင်သင်သည်သင်၏ iPhone အိမ်မျက်နှာပြင်ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။ သင် iOS 14 update ကိုရရှိသည်
• သြဇာသက်ရောက်သူများသည် Instas အတွက်သီးသန့်ဂျက်လေယာဉ်အဖြစ်ဟန်ဆောင်ရန်ပေါင် ၅၀ ပေးဆောင်ရသည်
အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - ဤသည်မှာတရားဝင် Instagrammable UK တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းဝင်းများဖြစ်သည်